ရှက်ကြောက်နေသောဆီးအိမ် (paruresis) ကော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အဘယ်အရာကိုရှက်ဆီးအိမ် (paruresis) ကော?
ရှက်ကြောက်နေသောဆီးအိမ် (paruresis) ကော။ Paruresis (ˌpɑrəˈriːsːs / par-ə-ree-sis) သည် phobia အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဝေဒနာသည်သည်အများပြည်သူအိမ်သာနှင့်အိမ်သာကဲ့သို့သော (အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း) ရှိနေခြင်းတွင်ဆီးသွားခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
porn စွဲသို့မဟုတ် compulsive porn ကိုအသုံးပြုခြင်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သို့မဟုတ်မပါလျှင်ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအချို့သောအရာတို့ကိုယောက်ျားတွေဆိုသည်:
ဟေးလူသားငါအတူတူပါပဲ အခြားလူများ (သူစိမ်းများ) ပတ်ပတ်လည်ရှိလျှင် piss လို့မရပါ။ ခံစားချက်တူတူပဲ၊ pissing မှာကျရှုံးမှာကိုသင်စောင့်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေကစောင့်နေတာလား။ ၎င်းသည် 'paruresis' ဟုခေါ်သည့်ပြcommonနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး youtube တွင်၎င်းအကြောင်းပြောဆိုဝံ့သောယောက်ျားများမှအလွန်ကောင်းသောဗီဒီယိုအချို့ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှူရှိုက်ခြင်းအားဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်နည်းစနစ်များရှိပါသည်။ အစောပိုင်း reboot လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အပတ် ၄ တွင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည်လူအများရှေ့၌ piss လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုခံစားမိလာသည်။ ငါမလုပ်ခဲ့သေးပေမဲ့“ af * ck မပေးနဲ့” ဟူသောကြီးထွားလာသောခံစားချက်ရှိခဲ့သည်။
ငါမကြာသေးမီကအော်ဂဇင်ပြီးနောက်အခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ဘေးတွင် piss ဖို့ကြိုးစားအခါတိုင်းယနေ့ငါအချို့စိတ်အနှောင့်အယှက်ရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်ငါကျိန်ဆိုသောကြောင့်မရယ်ပါနဲ့! အော်ဂဇင်ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းကပြသနာတစ်ခုသာရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါနောက်ကျောရပ်နှင့်စီး Arch နိုင်ဘူး! ဟားဟား
Paruresis (/ ˌpɑrəriːsɪs / တန်းတူ-ə-ree-မောင်လေးကလည်း) အဝေဒနာသည်ထိုကဲ့သို့သောအများသုံးအိမ်သာထဲမှာရှိသကဲ့သို့အခြားသူများရဲ့ (အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်) ရှိနေခြင်းအတွက်ဆီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် phobia အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ~ ဝီကီပီးဒီးယား
ငါကကိုယ့်မှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်, မသိရပါဘူး။ ဆယ်နှစ်ငါ cubicle အတွက်ဆီးမှအများသုံးအိမ်သာ၌ထ queuing ပါတယ်, ပြီးတော့ငါ့အ nofap သို့နှစ်လဒါပေမယ့်ကျွန်မပိုပြီးယုံကြည်မှုပေါ့, ငါလူယောက်ျားကဲ့သို့ခံစားတယ်, ငါမျက်စိထဲမှာကလူရှာနေတာ, ငါစုစုပေါင်းလူစိမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ peeing တစ်ဦးဆီးမှာရပ်နေတယ်, သူနှင့်အတူစကားလက်ဆုံစဉ်! WTF အိမ်ထောင်ဖက်? ချည်ဖို့ Link ကို
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါပဲတင်းကုပ်ထဲဝင်ပြီးငါ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်။ ကောင်မလေးဝင်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ အများအားဖြင့်တော့သူကလူထုံလိုရပ်ပြီးသူမကိုထွက်ခွာဖို့စောင့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ငါ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုဂရုစိုက်တယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ငါဟာဒီကိစ္စကိုအချိန်အတန်ကြာရုန်းကန်ရမယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအခုငါ nofap ကဒီမိုက်မဲသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအများပြည်သူပိုင်နေရာများတွင်ရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဤဆိုဒ်ကိုသွားပါနှင့်ဖိုရမ်ထွက်စစ်ဆေးပါ။ အချက်အလက်များ၏တန်ချိန်။ သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ http://www.paruresis.org/
[သူကသူ့ယာယီ paruresis NoFap နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ယုံကြည်သည် - သူကသူ့တိုးတက်မှုအလုံးစုံအပေါ်အလွန်သဘောကျပေမယ့်]
“ ကျွန်မရဲ့ nofap ခရီးကိုလေးလလောက်အကြာမှာ Parureisis (shy buadder) ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်အများသုံးရေချိုးခန်းထဲမှာသွားဖို့ငါအရမ်းခဲယဉ်းတယ်၊ ငါတကယ်သွားဖို့တောင်လိုအပ်တယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ fapping ပြီးနောက်ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိငါ၏အတက္ကသိုလ်မှာအလုပ်အများဆုံးရေချိုးခန်းသို့သွား။ အောင်မြင်စွာ piss ယူခဲ့ပါတယ်။ nofap သည်ကျွန်ုပ်၏ Paruresis နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ မိမိအ 160 နေ့အစီရင်ခံစာ Read.
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှ စ၍ ငါ၌မစင်ကြယ်သောဆီးအိမ်ရှိသည်။ ငါ့နံဘေးမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိရင်ငါဆီးထဲမှာနင့်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူး။ အိုးတစ်လုံးတောင်မှငါနေရာလိုအပ်တယ်။ ငါဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆီးဆီးရှောင်ရှား။
ယနေ့ငါဆီးအိမ်ကိုအတင်းအကျပ်ပြောင်းခိုင်းတယ် အများအားဖြင့်ဒီငါ့အဘို့ဂိမ်းကျော်လိမ့်မည်။ ငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားသည်ဟုခံစားရသည်။ ဖျက်သိမ်းရန်အသင့်ပြင်ခဲ့သည် (အခြေခံအားဖြင့်မင်းမှာရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိသည်။ အခြေအနေများသည်သင်ပြီးသွားပြီ၊ ဟန်ဆောင်ပြီးသည်အထိဟန်ချက်ညီသည်အထိရပ်နေပြီးဇစ်တက်အောင်လုပ်သည်) သို့သော်အမှန်မှာ piss သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေရောက်လာသည်။ ငါလုံးဝမှာမျှော်လင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက nofap ဆက်စပ်မှုရှိ၊ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုရှိတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းကတ ဦး တည်းကိုချွတ်ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါကထဲကကြီးပြင်းလာတယ်။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကဒီလမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်ငါအဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ရှကျကွောကျတတျသောဆီးအိမ်တိုးတက်မှု?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ Streak လုပ်နေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ဘေးတွင်တစ်ယောက်ယောက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်သည် shit မပေးပါ။
ဒါပေမယ့်ငါအနားမှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေပြီး PMOing ဖြစ်ရင်ငါအရမ်းစိတ်ပူပြီးမသွားနိုင်ဘူး
အရမ်းထူးဆန်းတယ် ဒါဟာဆင်ခြင်တုံတရားမဟုတ်ပါဘူး သီအိုရီအရကျွန်တော်ဟာမပြောတတ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါရောက်နေချိန်မှာငါက OMG ကိုငါမုန်းတယ်! ဒါပေမယ့် yeah, ဒီပစ္စည်းပစ္စယနက်ရှိုင်းစွာပြေး။ ငါဖြစ်ပျက်အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်ထက်အခြားမှာအားလုံးရှင်းပြချက်မရှိပါ။ ငါ nofap ကိုရောက်နေတဲ့အခါအဲဒါပျောက်သွားတယ်။